Uganda oo xirtay 5 dugsi oo lagu barto diinta Islaamka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Uganda oo xirtay 5 dugsi oo lagu barto diinta Islaamka
Mareeg.com: Dowladda Uganda ayaa albaabada u laabtay 5 dugsi oo lagu barto diinta Islaamka kadib markii ay ku eedeysay in ay ardeyda ka dhigayaan kuwo xagjir ah, sidaas waxaa sheegay sarkaal ka tirrsan booliska. Eedda ayaa waxaa iska diiday culimada Muslimiinta dalkaas.
Afhayeenka Booliska Uganda, Patrick Onyango ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Iskoolada Islaamiga ah ee ay xireen loo adeegsadey goobo lagu tababaro caruurta, si ay noqdaan xagjir kasoo horjeeda dowladda Uganda.
“Caruurta maskaxda ayey ka dhaqayaan, waxaana ay u tababarayaan in ay noqdaan xagjiriin ka horjeeda dowladda Uganda” ayuu yiri Patrick Onyango.
“Waxaa qorshuhu ahaa in marka ay gaaraan da’da saxda ah ay noqdaan kuwa ku kacsan dowladda Uganda” ayuu sidoo kale ku dooday Patrick Onyango.
Wadaad Muslim ah oo lagu magacaabo Kassim Nakibinge ayaa u sheegay wargeyska Daily Monitor in si aan caddaalad aheyn loo beegsaday iskoolada Islaamiga ah.
Boolisku waxay sheegayaan in Iskoolada la xirey caruurta dhigataa la doonaayo in ay ka mid noqdaan Fallaagada “Allied Democratic Forces” ee saldhigyada ku leh dalka Congo.
Uganda ayaa sidoo kale ka cabsi qabta ururuka Alshabaab ee dalka Soomaaliya, iyadoo ciidamada dalkaas ay Soomaaliya joogaan tan iyo sanadkii 2007.
Somaliland oo rabta iney la heshiiso Suldaan gedood sameeyey oo hubka qaatay